संविधानको ४ वर्ष : कार्यान्वयन भएनन् मौलिक हक
घर नभएका दलितलाई घर र जमिन नभएकालाई जमिन दिइने । छोराछोरी पनि सित्तैमा पढाइदिने । यस्तो सुन्दा बैतडी, देहीमाडौंकी निर्मला लोहारको मन खुसीले उफ्रिएको थियो । संविधान जारी भएका बखत घरको रेडियोले यसका विशेषता सुनाउँदा निकै चासो दिएर कान थापेकी थिइन् उनले । गाउँका जान्ने–बुझ्नेले पनि संविधानमा पहिलो पटक ‘दलितको हक’ किटानै गरिएकाले जसरी पनि लागू हुने सुनाए । उनलाई बधाई दिए ।
संविधानको ४ वर्ष : छिमेकीको दृष्टि बदलियो कि उस्तै ?
नयाँ संविधान जारी हुनु तीन दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका थिए, तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर । संविधानमा ‘अधिकतम सहमति खोज्नुपर्ने’ सन्देश लिएर आएका उनले नेपालमा जारी हुनै लागेको संविधानप्रति ‘भारतीय असन्तुष्टि’ खुलेरै जनाए तर राजनीतिक सहमति र दलीय समझदारीका माझ २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भयो ।
सत्तारूढ दल समाजवादी पार्टीले नै संविधान दिवस नबनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले तीन दिनसम्म दिवसलाई उल्लासपूर्ण रुपमा मनाउन अपिल गरेपनि सत्ताघटक दलले नबनाउने निर्णय लिएको हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतले संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’को संज्ञा दिँदै विरोधमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् ।
संविधान दिवस स्वस्फूर्त मनाउने कि जबर्जस्ती ?
यसपालि सरकारले संविधान दिवस (असोज ३) भव्यतापूर्वक मनाउने निर्णय गरेको छ  ।